ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ပြည့်စုံဆက်ဆံရေး Keep လုပ်နည်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်. 13 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အများစုကစုံတွဲများပြီးသားသိရ: ပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးအချိန်နှင့်စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်. တချို့ကခဲယဉ်းလမ်းသင်ယူနေစဉ်, တစုံတယောက်ကိုပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲတစ်ဦးပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးရှိသည်မဟုတ်နိုင်ကြောင်းအရမ်းအစမှနားလည်သဘောပေါက်ကိုအခြားသူများ. သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးမှာရှာကြသည်သင်ယခုသည်လမ်းနှင့်အတူအပြည့်အဝမပျော်ရွှင်ခံစားရလျှင်, ဒါကြောင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်တစ်ဦးလျှင် Starting Point သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့အားသင်သိသင့်သည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှု keys တွေကိုမသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသာယာသောနှင့်ပြည့်စုံရာဘဝမှစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်. သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် split ဒုတိယတို့၏ဆက်ဆံရေးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလို့မရဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရန်အချို့သောအချက်များဖြစ်ပါသည်:
ကပြောပါတယ်ခံရကြောင်း, ဘဝတွင်သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောဂိုးကိုသင်ထိုင်နေစဉ်မှာလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းငှါမဖြစ်သည်ကိုသိနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမလုပ်ဆောင်သင့်. ရိုးရှင်းစွာသင့်တံခါးကိုလာခေါက်မှပျော်ရွှင်မှုကိုမျှော်လင့်မဟုတ်ဘဲမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏. ပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးဦးချင်းစီကတခြားအကြောင်းလေးစားစောင့်ရှောက်သောသူလူနှစ်ဦးကပါဝင်ပတ်သက်. တစ်ခုချင်းစီကိုမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးမှတစ်ခုခုကြာ, ဒါပေမယ့်လည်းထဲသို့တစ်ခုခုယူဆောင်လာ. ချစ်ခြင်းမေတ္တာကပင်မျက်စိကန်းနှင့်ခြွင်းချက်မရှိနိုင်ကြသော်လည်း, ဒါကြောင့်နှောင်ကြိုးမဲ့ဖြစ်နေစရာမလိုဘူး. ထိုကွောငျ့, အခြားသင်ပျော်ရွှင်စေမမျှော်လင့်ပါဘူး. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ; သင့်ရဲ့စုံတွဲ၏ပျော်ရွှင်မှုအထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက်ပျော်ရွှင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
2. ကိုယ်မျက်စိ၌ရှိသောတံကျင်မှ Remove
အဟောင်းစကားကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိထဲကပျဉ်ယူစေခြင်းငှါငါတို့ကိုသှနျ, ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သာတွေ့မြင်နိုင်ဖြစ်လိုလျှင်နောက်မှအခြားသူတစ်ဦး၏မျက်လုံးမှအပြောက်တွေကိုဖယ်ရှား. ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? မှန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှာပထမဦးဆုံးကြည့်ရှု, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့ misshapes ထွက်ထောက်ပြမီတွေ့ရှနှင့်သင့်အားနည်းချက်တွေကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစား. အခြားအစွန်းရောက်အတွက်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံဘို့ဘဲသွား, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်တချို့လျော့ခုတ်ဖြတ်, တစ်ဦးမှန်ဘီလူးမှတဆင့်သူ / သူမ၏တိုင်းတစ်ခုတည်းပြောင်းရွှေ့ကြည့်ကိုရပ်တန့်, နှင့်သူတို့၏အပြုအမူကိုနားလည်သဘောပေါက်အစားတို့ကိုစီရင်ဖို့ကြိုးစား. နောက်တခါသင့်တောင်မှနည်းနည်းလေးစုံတွဲသည်ပဋိပက္ခရှိသည်, အစားအတစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်အပြစ်တင်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေ၏, သင်မှားလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ. ပဋိပက္ခရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏နည်းလမ်းရှာဖို့ကြိုးစားပါ, နှင့်, ထိုကဲ့သို့သောသဘောထားကွဲလွဲမှုပေါ်ပေါက်သည့်အခါ, ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲကဖြေရှင်းပေးဖို့အဖြေတစ်ခုစဉ်းစား.
3. သင့်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးဆေး Keep
ဤမျှလောက်များစွာသောဆက်ဆံရေးကိုနှစ်ဦးကိုမိတ်ဖက်တစ်ဦးစစ်သည်တော်ရဲ့သဘောထားချမှတ်ရှိသောကြောင့်သာတစ်လှည့်မှားယူ. ပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးဟာစစ်မြေပြင်မက. ပိုမိုမြင့်မားရ​​မှတ်သင်ပျော်ရွှင်ခံစားမကူညီကြမည်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့သို့မဟုတ်သင့်အောင်ပွဲရေတွက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. အဲဒီအစား, သင့်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးဆေးစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလူနာဖြစ်. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သင်တို့၏ရန်သူမဖြစ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ, သင့်ရဲ့စကားသံကိုမြှင့်တင်လိုသည့်အခါတိုင်း, အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချုပ်တည်း. သင်သည်ငြိမ်ဝပ်စွာကနေတဆင့်စကားပြောဆိုရန်တတ်နိုင်ကြသည်အထိစောင့်, နှင့်သင်မကြာမီရလဒ်များမြင်လိမ့်မည်.
အစိုင်အခဲအိမ်သူအိမ်သားအစိုင်အခဲရိုးအမြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်သလိုတူ, ပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးကျန်းမာသူများကိုပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည်. ဒါဟာသင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်မှရိုးသားဖို့ရှိသည်နှင့်ကိုဆိုလိုသည်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှအလွန်အစမှ. သင်အတူတကွအနာဂတ်တစ်ခုစီစဉ်နေသည်ဆိုပါကအဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏အားနည်းချက်တွေကိုဝှက်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအတိုအရှည်ကိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း? အခြားနောက်ဆုံးမှာသင့်အားနည်းတဲ့အချက်တွေကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်. သင်သည်အစဉ်အဆက်သင်၏မိတ်ဖက်အမှန်တကယ်သင်သည်မှားယွင်းသောထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသင်၏ဘေးထွက်ကိုချစ်အံ့သောငှါထင်ကြ?
အဘယ်သူသည်ပြည့်စုံဆက်ဆံရေးရှိမင်္ဂလာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုစွန့်လွှတ်ကြရပြောပြီ? သင်သည်ဤသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့ဆန္ဒပါပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, options နှစ်ခုကိုရှိပါတယ်: တစ်ခုခုကိုသင်သူ / သူမ၏မှားရင်း, သို့မဟုတ်ပါကတဦးကိုမင့်. တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းမပြု,, မသာတစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်တစ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအဘို့အညာဘက်စိတ်သဘောထားတစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်း. အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်သော်, ကျန်းမာသောမေတ္တာကိုမိတ်ဖက်ထိုနှစ်ခုအထောက်အပံ့ကိုဆိုလိုသည်နှင့်၎င်းတို့၏အိပ်မက်များကိုလိုက်စားရန်အချင်းချင်းအားပေး. သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒကိုနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေးမဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင်မကြာမီစိတ်ပျက်နှင့်စွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်. ဒီသင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအားဦးတည်သွားစေလိုသည်အဘယ်မှာရှိ?